भारतसँग 'अम्रेला एग्रिमेन्ट' नगर्न विज्ञको सुझाव १४ साउन, काठमाडौं । पूर्वजलस्रोत मन्त्री, नेता एवं विज्ञहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतसँग हात पसार्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।...
कार्यदलले बनाएन पीपीए १४ साउन, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणबारे छलफल गर्न सरकारले सर्वदलीय बैठक डाकेको छ । बुधबार बस्ने भनिएको तीन दलको बैठक स्थगित गरेर...
पाटन अस्पतालमा उपद्रो मच्चाउने महिलाले माफी मागिन् एक महिलाले नक्कली आमा बसेर हंगामा मच्चाएको १० दिन बितिसक्दा पनि पाटन अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सहरु अहिलेसम्म तनाबमा छन् ।
कालिसले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट विदा लिए
हाम्रो कस्तो मनस्थिति भयो भने, विद्युत उत्पादन गर्ने, बेच्ने अनि पैसा कमाउने । यो दरिद्र तरिका हो । विद्युत कच्चा पदार्थ हो । हाम्रो...
१४ साउन, काठमाडौं । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरु ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सत्तारुढ दलहरुले चासो नदिएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले अब उनीहरुलाई नपर्खिने...
१४ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ परेका मध्यमाञ्‍चल सिंचाई बिकास डिभिजन नं. ५, भरतपुरका तीन ईन्जिनियर र एक लेखा अधिकृतविरुद्ध...
सडकमा ट्याक्टर राखेर प्रशासनको विरोध
नचिनेको च्याउ खाँदा एकको मृत्यु
उत्कृष्ट परीक्षा केन्द्रको पुरस्कार कटौती
१४ साउन, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो वीर अस्पताल अगाडि खिया लागिसकेको फलामे बेच्नमा एक महिला पीडा सहन नसकेर छट्पटाइरहेकी थिइन् । लुगाको पोको सिरानी...
अहिले जुन नयाँ प्रस्ताव भारतको तर्फबाट आएको छ, हामीकहाँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पीटीए) भन्ने गरिन्छ, जनजिब्रोमा भनिन्छ, विद्युत खरीद-विक्री गर्ने । तर, भारतीय प्रस्तावमा...
१४ साउन, काठमाण्डौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशन्न नेपाल भ्रमणमा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका पाँचवटा राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई पनि समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ...
नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो प्रयोग
मोदीको नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ हाउगुजी
कुवेतमा सडक दुर्घटना, २ नेपालीको मृत्यु
सुष्मा स्वराजको मिटिङबारे अनेकौं कुरा भए । तपाईहरुलाई थाहा होला, सबैभन्दा पहिले सुष्मा स्वराजले पशुपतिसमशेर राणालाई भेट्नुभो । कुनै...
बिजनेस खुल्यो बीमा समिति, कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित
१४ साउन काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि ठप्प रहेको बीमा समितिको कार्यालय बुधबारदेखि खुलेको छ । आन्दोलनरत कर्मचारी संघले आन्दोलन स्थगित गरेपछि ठप्प रहेको समिति खुलेको हो । आन्दोलनबाट बीमा क्षेत्रमा कार्यरत बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, सम्पूर्ण सेवाग्राही तथा बीमासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षलाई संघर्षको कार्यक्रमबाट असर पर्ने देखिएकाले आन्दोल स्थगित गरिएको संघले जनाएको ...
बलिउड स्टारका पत्नीहरु आफ्ना पति माथि शंका गर्छन् । यो कुरा सुनेर तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला । तर सत्य यही हो । विश्वसुन्दरी ऐश्वर्या राईदेखि...
यसअघि ‘दिङ्ला बजारमा’ गीत सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाएका गायक योगेन्द्र राईले आफ्नो सांगीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसैक्रममा, उनले ‘आज यहाँ भोली कहाँ’...
‘मेरो भ्यालेन्टाइन’ स्टारको दम कती ?
सलमान खानका ७ वटा सिनेमाले बक्स अफिसमा १ सय करोडमाथिको व्यापार गरेका छन् । योसँगै उनी सवैभन्दा धेरै सिनेमा १ सय करोडमा पुर्‍याउने पहिलो...
सलमानले करण जोहरसँग मागे डेढ अर्ब पारिश्रमिक
१४ साउन, काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका अलराउन्डर ज्याक कालिसले सबैखाले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । गत डिसेम्बरमा टेष्टबाट विदा...
१४ साउन, काठमाडौं । लुइस स्कोलारी ब्राजिलियन क्लब ग्रेमिओको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन् । ग्रेमिओका प्रशिक्षक डुंगा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक बनेपछि स्कोलारी उनको स्थान लिएका हुन् । ग्रेमिओ ब्राजिलियन साबेलाको स्थानमा मार्टिनो !
ब्राजिलका प्रशिक्षकले खेलाडीहरुलाई भने-पुरुषहरु रुँदैनन्
पारसको बैंकक नै बस्ने योजना
सिराहाका किसानलार्इ कुकुरले बनायो लखपति !
धर्मगुरु श्यामर ‘नेपाली नागरिक’ रहेको खुलासा
भीआईपीका अंगरक्षकलाई गोली हान्ने अधिकार
काठमाडौं, कास्की, मोरङ, सुनसरी र झापा सबैभन्दा असुरक्षित
लुटिएको सुन प्रहरीको शौचालयमा